Digital Patrika – मुख्यमन्त्रीको दौडमा को को छन् अगाडि, कहिले चुनिएलान् मुख्यमन्त्री ?
मुख्यमन्त्रीको दौडमा को को छन् अगाडि, कहिले चुनिएलान् मुख्यमन्त्री ?
प्रदेश सभाका ९३ सिटमध्ये एमालेले ५१ सिट जितेको छ । मुख्यमन्त्रीमा सचिव भीम आचार्य र पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राईको मुख्य दाबी छ । हिक्मत कार्की, जीवन घिमिरे, राजेन्द्र राईले पनि आकांक्षा राखेका छन् । तर, दलको नेता छान्न निर्वाचन हुँदा अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपाल समूह बाँडिन सक्ने देखिएकाले उनीहरू पनि आचार्य र राईमध्ये एकको पक्षमा उभिने सम्भावना छआचार्यनजिक कम्तीमा २८ देखि ३२ तथा राईको २२ देखि २५ सांसद सांसद पक्षमा छन् । तर, सर्वसम्मतको प्रयास भए प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र १ मा राई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ ।प्रदेश २ मा मधेसी दलहरू बहुमतमा छन् । जम्मा १०७ सिटमध्ये संघीय समाजवादी फोरमले २९ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले २५ सिट जितेको छ । दुई दल मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा छन् । राजपाभन्दा बढी सिट रहेकाले मुख्यमन्त्रीमा संघीय फोरमले दाबी गर्दै आएको छ । फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र कोषाध्यक्ष विजय यादव मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । उनीहरू संसदीय दलको नेता बन्न आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । दलको नेता चुनिन कम्तीमा १५ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै आकांक्षी नेतादेखि सांसदसम्मलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
संस्थापनले कम्तीमा ३४ र नेपाल पक्षले २४ सांसद आफ्नो पक्षका रहेको हिसाब गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष रहेकी, महिला, जनजातिका साथै पार्टीको प्रदेश सचिवालयले मुख्यमन्त्रीमा सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेकाले शाक्यका लागि चुनावमा सहजता पनि हुन सक्छ।
शीर्ष नेताबीच सहमति भएमा गौतमनिकट किरण सर्वसम्मत बन्ने सम्भावना देखिए पनि सुब्बालाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती कठिन छ । किनभने यो प्रदेशमा सभामुख र मुख्यमन्त्रीपछिको वरीयताको मन्त्री पनि माओवादीको भागमा परेको छ।
पार्टीमा पुरानो, पहाडी क्षेत्रमा राजधानीको माग भइरहेकाले अहिलेको अस्थायी मुकाम धनगढीलाई नै कायम राख्ने गरी सन्तुलन मिलाउन धेरै स्थानीय र केन्द्रीय नेता उनको पक्षमा खुल्दै गएका छन् ।
दुई वर्षमा करिब ३ हजार ८ सय किलो सुन तस्करी, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’
माओवादीको नाममा काम नगरि तलव पचाउँने यी हुन् आइसीसीका कर्मचारी
१ सय ९२ मुलुकका प्रहरीको खोजीमा रहेका मनाङे स्वयम्भुबाट पक्राउ
ललितपुरमा अशक्तका लागि अमेरिकी नेपालीको पहलमा अत्याधुनिक पुस्तकालय बन्ने
६१ अर्ब मध्ये दीपक जोशी श्रीमानले मात्रै ५ अर्ब ३४ करोडको आदेश,